SARIPIKA: Tonizia Tamin’ny 2013: Taona Iray Maozatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2014 7:02 GMT
Taona iray maozatra ho an'i Tonizia ny 2013: vonoolona politika roa, hetsi-panoherana, tafika sy herim-piarovana nataon'ireo vondrona mitam-piadiana ho lasibatra ary krizy politika tsy misy fiafaràny
Ny 6 Febroary, maty nisy nitifitra teo ivelan'ny tranony i Chokri Belaid, mpitarika iray avy amin'ny mpanohitra sy tena mpanakiana ny Islamista ao Tonizia. Ny Hetsika Ennahdha an'ny antoko eo amin'ny fitondrana no nampangain'ny fianakaviany, raha ny governemanta kosa manilika ny tsiny ho any amin'ny Ansar al-Sharia.
An'aliny ireo nanatrika ny fandevenana an'i Belaid ny 8 Febroary tao Tunis. Sary : Elyes Jaziri (fampiasàna nahazoana alàlana)
Vao niparitaka ny vaovao mikasika ny famonoana an'i Belaid, nameno ny arabe tao Tonizia ireo mpanao hetsi-panoherana, nifanandrina tamin'ny polisy sy nandoro ireo biraon'ny Ennahdha.
Nitifitra entona mandatsa-dranomaso ny polisy mba hanaparitahana ilay fihetsiketsehana nanohitra ny governemanta tamin'ny 6 Febroary. Sary: Amine Ghrabi.
Tamin'ny Andron'ny Repoblika [25 Jolay], nampihovitrovitra indray ny firenena ireo hetsi-panoherana ny governemanta taorian'ny famonoana faharoa tao anatin'ny enim-bolana latsaka monja. Maty nisy nitifitra teo ivelan'ny tranony tamin'ny antoandro be nanahary izao i Mohamed Brahmi, avy amin'ny mpanohitra ary mpikambana tao amin'ny Antenimieram-Panorenam-Pirenena – National Constituent Assembly (NCA). Niampanga ny Ennahdha ihany koa ny fianakavian'i Brahmi sy ny mpanohitra. Nandà ny tsy maha-voarohirohy azy na amin'inona na amin'inona ity farany.
Napetraka hiala sasatra ny 27 Jolay i Mohamed Brahmi . Sary : Lilia Blaise
Taorian'ny namonoan'ny sasany an'i Brahmi, be ny hetsi-panoherana nataon'ny avy amin'ny andaniny sy ny ankilany tsy mitovy hevitra ary nampiditra an'i Tonizia ho anaty krizy politika naharitra am-bolana maro.
Fihetsiketsehan'ireo mpomba ny governemanta nifamory teo ivelan'ny biraon'ny PM, 6 Aogositra. Sary : Pajy Facebook an'ny Ennahdha
Mpanao hetsi-panoherana mitaky ny fialàn'ny governemanta sy fandravàna ny Antenimieram-Panorenana (NCA) nanao rojon'olona teo anelanelan'ny biraon'ny PM sy ny foiben-toeran'ny NCA, ny 31 Aogositra. Sary : Amine Ghrabi
Ny 2013, nanatri-maso ny firongatr'ireo milisy mitam-piadiana ihany koa i Tonizia, izay nikendry ireo herim-piarovana sy tafika mitam-piadiana. Nandritry ny taona, nihaza hatrany ireo vondrona mitam-piadiana tany an-tendrombohitr'i Chaambi ireo manampahefana Toniziana, 290 kilaometatra eo ho eo miala an'i Tunis renivohitra, toerana izay nandratra sy nahafatesana marobe tamin'ny tafika sy ny polisy noho ny vanja nalevina.
Ny 30 Jolay, miaramila valo no maty tanaty velam-pandrika tao Chaambi, nampivala-ketraka ny firenena.
Lahinjiro narehitra ho fanomezam-boninahitra an'iireo miaramila maty tao Chaambi. Sary : Seif Allah Bouneb
Tany amin'ny faran'ny Aogositra, nataon'ny governemanta Toniziana ho anatin'ny lisitry ny “fikambanana mpampihorohoro” ny Ansar al-Sharia Tunisia (AST), tamin'ny fanakianany azy ho nampamono an'i Belaid sy Brahmi ary nampifandraisany azy tamin'ireo vondrona mitam-piadiana manao ny asany any an-tendrombohitr'i Chaambi. Vondrona Islamista mahery fihetsika ny AST, mitaky ny fametrahana lalàna islamika ao Tonizia.
Polisy mametraka ny fandraràn'ny governemanta ny Kaongresin'ny AST tamin'ny 19 May tao Kairouan. Sary: Nawaat
Ny Oktobra, manampahefan'ny hery fiarovana niisa valo no maty ihany koa nandritry ny fifandonana tamin'olona nitam-piadiana tao Sidi Ali Ben Aoun (faritanin'i Sidi Bouzid) sy Gboullat (faritanin'i Beja). Nandritra io volana io ihany, mpanao vy very ny ainy iray no nanapoaka ny tenany teo aminà tora-pasika fialan-tsasatra tao an-tananan'i Sousse. Izy tenany ihany no maty nandritra izany fa tsy nisy naratra na maty.
Efa faramparan'ny taona 2013, notendrena i Mehdi Jomma, Minisitry ny Indostria ao anatin'izao governemantan'ny fiaraha-mitantana izao, ho PM vaovao, taorian'ny fifampiresahana teo amin'ny mpanohitra sy ny governemanta.
Mandritra izany, ny Antenimieram-Panorenam-Pirenena (NCA) mbola mandany lalàmpanorenana iray sy mametraka filankevi-pifidianana iray atao hikarakara ny fifidianana ho filoham-pirenena sy solombavambahoaka amin'ny tapaky ny Janoary. Hitondra fitsaharan'ny krizy politika ho an'i Tonizia ve ny 2014 ary hametraka eo amin'ny fitondrana ny tetezamita demaokratika mandritra ny telo taona miaraka aminà fifidianana tsy mitanila sy mangarahara? Ny fotoana irery no hilaza izany
Ao anatin'ity sariitatra ity, avy amin'ny “La Bulle de Dlog”, “Mirary soa” ho an'ny taona 2014 i 2013